अग्नि सापकोटा « Janata Samachar
Tag: अग्नि सापकोटा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामु्ख अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा कर्तव्यजन सम्बन्धी मुद्दा परेपछि भएको अनुसन्धानको प्रगतिबारे एक महिनाभित्र पववरण्न पेश गर्न गृहमन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना
सभामुख अग्निलाई अदालतको अग्निवाण
अर्जुनकी पत्नी पूर्णीमाया लामाले अग्नि सापकोटालाई नै सोधेकी छन्– मेरो श्रीमान खै ? उत्तर पाइनन, गार्डले लुकाएरै लगे । ठूलै संघर्ष गरेको छ, अर्जुनको परिवारले न्याय पाउन । जिल्ला अदालत
अग्नि सापकोटा : हेडमास्टरदेखि सभामुखसम्म
काठमाडौं । चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको प्रतिनिधिसभाले सभामुख पाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभामा आइतबार खुशीयाली छायो । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरु उहाँलाई बधाई दिन पहिल्यैदेखि आत्तुर
अग्निलाई बादलको बधाई
काठमाडौं । नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटालाई यतिखेर बधाईको ओइरो लागिरहेको छ । पार्टीका नेता, कर्मचारी र शुभेच्छुकले उहाँलाई कसैले भेटेरै र कसैले फोनमार्फत् बधाई दिइरहेका छन् । केही नेता तथा
काठमाडौं । चार महिनादेखि रिक्त प्रतिनिधिसभाको सभामुख आज पूर्ति हुँदैछ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध हुने निश्चित छ । सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभामा
‘ज्यानमुद्दा चलिरहेका सापकोटालाई सभामुख बनाउने ? सांसद चौधरीलाई जेलमै राख्ने !’
शिव अधिकारी यदुवंशी काठमाडौं । सांसद रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेका ११ जनाको मुद्धा फिर्ता गरी जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सापकोटालाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले नेता अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।नेकपाका सचिवालयको आइतबारको बैठकले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको हो । नेकपाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको